Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.4.1.2 ukusekwa Ubuhlobo phakathi kwabafundi
Abaphandi kusetyenziswa logs email neerekhodi zolawulo ukuqonda ubuhlobo ukusekwa. Olu phando kufuna ajongene kwezicelo data ezinkulu.
Kwiimeko ezininzi, abaphandi azikho unethamsanqa elaneleyo ukuba yonke into ofuna eqokelelwe ngokuzenzekela kwindawo enye. iingxaki ezimbini efanayo ingcaciso engaphelelanga malunga abantu nonokungangqinelani phakathi olwakha ngayo ithiyori kwaye data. Zombini ezi ngxaki bebemamele Kossinets and Watts (2009) njengenxalenye yeenzame kwabo ukuyiqonda indlela zentlalo iinethiwekhi ziyavela.
Kalukhuni ukuthetha, abaphandi bacinga ukuba uthungelwano yoluntu zazivelela iqhutywa iinkalo ezintathu: 1) isakhiwo kobudlelwane ezikhoyo 2) Imisebenzi ekwabelwana (umzekelo, dorms, iiklasi) kunye 3) nkcukacha. Ukuqonda yolwalamano phakathi kwezi zinto zintathu ufuna iinkcukacha womnatha engena idityaniswe ulwazi malunga ngabahlali ngabantu 'nemisebenzi. izifundo ngaphambili ukuba ezinye zezi mpawu, kodwa akukho namnye zonke zontathu.
Kossinets kunye Watts baqalisa uphando lwabo nokuzuzwa logs email eyunivesithi elikhulu. Nangona kunjalo, ezi logs email bodwa aziphelelanga, bona musa ziquka yonke into efunekayo ukuze ayiqonde kakuhle imiba eyahlukeneyo uqhuba womnatha zazivelela. Ngoko ke, Kossinets kunye Watts zadityaniswa kwezi zigodo imeyile, kunye nezinye imithombo ezimbini yolwazi: iinkcukacha ngendawo okuyo eqokelelwe idyunivesithi ulwazi malunga nemisebenzi ekwabelwana (umzekelo, ingcaciso yokuhlala zabafundi kunye noluhlu olupheleleyo ubhaliso kwizifundo). Zakuba ezi imithombo ezintathu lolwazi, ngalinye lwalungagqibelelanga, ziye zadityaniswa ndawonye Kossinets kwaye Watts waba isakhiwo data esinamandla ukuqonda womnatha zazivelela.
Kodwa ke, kukho elinye mngeni wokugqibela ukuba kwafuneka ukuba sizoyise. Kossinets kunye Watts wayefuna ukufunda indlela kwinethiwekhi yoluntu kule yunivesithi ngendaleko ngoko kwakufuneka indlela ukusebenzisa logs email yaba uqikelelo ngubani odibene ngelo xesha. Njengoko kuchaziwe ngaphambili (Section 2.3.2.1), olu hlobo nokusetyenziswa kwe olwakha ngayo ithiyori ngumngeni omkhulu xa usebenzisa ikhethe yedijithali uphando lwentlalo. Ekugqibeleni, Kossinets kunye Watts wagqiba ukuba abantu ababini ingqalelo kwakunento ngexesha \_ (t \_) ukuba kwaye kuphela ukuba ngokutshintshisa emails (\_ (i \_) imeyile \_ (j \_) kwaye \_ (j \_) imeyile \_ ( i \_)) kwiintsuku ezingama-60 ezidlulileyo. Olu khetho abazange engenasizathu; zazisekelwe ingqalelo ngononophelo esisicelo lokufumanisa ngophando, kwaye Kossinets kunye Watts zitshekishwe ukuba iziphumo zawo robust kwezi ukhetho. Ngokubanzi, ukuba nokusetyenziswa yakho ibandakanya ukukhetha ezinye ezithile cutoffs-ndithi kwiintsuku 60 endaweni ezingama-30 okanye 90 iintsuku-ke ngumbono omhle ukuqinisekisa ukuba iziphumo zakho a yi nangxaki olu khetho.
Xa Kossinets kunye Watts wathetha ngxaki okubangelwa kwezicelo (umzekelo, ezishiyiweyo iinkcukacha ngendawo okuyo, ezishiyiweyo iinkcukacha malunga umsebenzi ekwabelwana, uyayiphosa wakha ithiyori), kwafuneka data obabenza ukuqonda amandla ezintathu eziphambili ukuba uyakwazi ukuqhuba uthungelwano zazivelela: 1) isakhiwo kobudlelwane ezikhoyo 2) imisebenzi ekwabelwana (umzekelo, dorms, iiklasi) kunye 3) nkcukacha. Ngokuvisisana uphando ngaphambili, bafumana ukuba abantu abahlala efanayo badla ukwenza ubudlelwane. Nakuba kunjalo, ngokungafaniyo kwizifundo ngaphambili, bafumana ukuba le patheni kuthityazwa ngamandla isakhiwo kuthungelwano osele nemisebenzi ekwabelwana. Ngamanye amazwi, umlinganiselo ukuba abaphandi ngaphambili uyibonile kancinane kwacaciswa data abaphandi ngaphambili kwakungekho. Ngenxa yoko, ekumenezeni ngempumelelo kunye kwezicelo data zabo, Kossinets kunye Watts akwazi ukucacisa impefumlelwano ezahlukeneyo izinto ezahlukeneyo ukuqhuba evolutions yenethiwekhi yoluntu.